Akhriso: Rikoodhkii Uu Jabiyey Iyo Taariikhdii Uu Amad Diallo Sameeyey Goolkii Uu Dhaliyey Xalay - GOOL24.NET
Kulankii Manchester United ay barbarraha 1-1 la gashay AC Milan lugta hore ee wareegga 16ka tartanka Europa League, waxa taariikh ku sameeyey da’yarka reer Ivory Coast ee Amad Diallo oo dhaliyey goolka kooxdiisa.
Laacibkan da’da yar oo waqtigii nasashada lagu beddelay Anthony Martial ayaa shan daqiiqadood oo kaliya markii uu garoonka ku jiray, waxa uu madax ku dhaliyey laad xor ah oo uu soo qaaday Bruno Fernandes, laakiin kooxdiisa ayaan nasiib u yeelanin inay goolka xajisato iyadoo waqtigii dheeriga ahaa ee lagu daray uu Simo Kjaer ka dhaliyey goolka barbarraha.
Goolka uu Amad Diallo dhaliyey ayaa ahaa midkii ugu horreeyey ee uu u saxeexo Manchester United oo bishii January uu uga soo wareegay Atalanta, waxaase uu hore goolal ugu dhaliyey naadiga da’yarta oo uu waqti kusoo qaatay ka hor intii aan loo soo dallacsiinin naadiga waaweyn oo ay u ahayd ciyaartii saddexaad ee uu u dheelo.
Laacibkan isku qoray taariikhda kooxda kaddib goolkaas, waxaanu noqday ciyaartoygii ugu da’da yaraa ee aan u dhalinin Britain ee abid u dhaliya gool Manchester United.
Amad ayaa goolkan dhaliyey iyadoo ay da’diisu tahay 18 sannadood iyo 243 maalmood.
Kaddib ciyaarta, kabtanka Manchester United ee Harry Maguire oo hadlay ayaa amaanay da’ yarkan, waxaanu yidhi: “Waa wiil da’yar oo mustaqbal weyn. Wuxuu soo galay waqtigii nasashada isagoo isku dayaya inuu is muujiyo oo uu goolal dhaliyo waqti hore.
“Taasi kalsooni ayay siin doontaa. Waxaad ku arkaysaa tababarka maalintii, waxaanu bilaabay inuu horumar sameeyo, una shaqeeyo si adag. Wuxuu noo noqon doonaa ciyaartoy weyn.”